Sherlock Holmes kune wese munhu. Zviso zvakawanda zvemutikitivha ane mukurumbira | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vechidiki Mabhuku, Nhema nhema
Zviso zvakawanda zvemutikitivha weChirungu ane mukurumbira
A Sherlock Holmes hapana chikonzero chekuzviratidza. Mutikitivha ane mukurumbira, akagadzirwa na changamire Arthur conan doyle, chikamu chemafungiro epasi rose akabatanidzwa. Zviso zvavo zvakawandisa sevaverengi vavo. Uye shanduro (dzakatendeka kana kwete) dzenyaya dzadzo dzisingaverengeke mu cinema, terevhizheni uye chero fomati izvo zvatinoda kufungidzira. Ini ndichaenda kune avo varipo. Kubva pane zvakanyanya classical kubva kumabhaisikopo kusvika kune akawanda zvazvino, iyo yakashandura hunhu pasina kushandura hunhu hwayo iota imwe. Uye zvechokwadi iyo vana nevechidiki. Kubva pane wangu anodikanwa wechiJapan anime terevhizheni Sherlock kuna Isaac Palmiola anodiwa Perrock kwakanaya yakawanda, asi ngano inoenderera. Ngazvive zvimwe zvakawanda shanduro. Chinyorwa ichi chakakumikidzwa kuna Sara, chimwe chezvitoro zvangu zvemabhuku.
1 Holmes pamabhaisikopo
2 Iyo Holmes yezana ramakumi maviri nemasere
3 Vanonyanya kuita vana uye vechidiki Holmes
3.1 Sherlock, Lupine neni - Irene Adler
Hapana munhu ari nani kupfuura a Mutambi weBritish kuunza kuhupenyu pane hombe skrini. Uye yemazita makuru akaikweretesa iye, ini ndakasiiwa nechiso uye runako rwemutambi weSouth Africa Basil rathbone. Iwo mafirimu gumi nemana aakatora pakati pa1939 na1946 padivi naNigel Bruce saDr Watson akamupa mukurumbira wepasirese.
Izvo zvisingaenzaniswi Peter Kusimudza Iye akamupawo yake chaiyo physiognomy mune iyo vhezheni ye Imbwa yeBaskervilles chii chakagadzirwa nemugadziri sando. Uye akazotora anopfuura makore matatu gare gare mu sarja kubva ku BBC iyo yakanga yatanga muna 1964. Akairidza zvikamu gumi nezvitanhatu. Asi chaizvo mukati Imbwa yeBaskervilles de la Hammer rakabatana neimwe huru, Christopher Lee, iyo zvakare ichave Holmes muma60s.
Yekupedzisira uye, chokwadika, rakakurumbira zita reBritain iro rakapa hupenyu rave rimwe changamire, Ian McKellen, iyo muna 2015 yakadzokorora zvakare mune yayo yakanyanyisa toni toni mu VaHolmes.
Iyo Holmes yezana ramakumi maviri nemasere
Yakanga iri yekuAmerica Robert Downey Jr. chii pamwe chete Judha Law saWatson vakapa mavara aDoyle mamwe mashoma, ngatitii, akawedzera maficha. Ruoko rwemutungamiriri rwakabatsirawo pane izvi Guy Ritchie, kuti neMutemo, vakaisa chikamu cheBritish.
Asi yanga iri paterevhizheni kupi zvakare BBC Akageza kumeso kwake ndokumudzosa kumazuva edu. Serie Sherlock uye zviso zve Benedict Cumberbatch naMartin Freeman Ndiwo maHolmes naWatson eiyo zvizvarwa zvitsva. Uye uku zvakare kubudirira kuvaswededza padyo neyakafa manyorero hunhu hwaDoyle. Kunyangwe ndikashandisa nharembozha uye internet.
Vanonyanya kuita vana uye vechidiki Holmes
Izvo kwandiri ndizvozvo Imbwa akangwara kwazvo nezwi rinoshamisa remubati mutambi we Ngano 80s anime akateedzana. Simudza ruoko rwako uyo asina kuimba yako kugadzirisa nokusingaperi. Chinhu chakanakisa ndechekuti vana vamai vangu vane makore matanhatu neane ekuberekwa vanoenderera mberi nekuiimba izvozvi, uye kuti munguva pfupi iri kutevera vachatanga kuverenga zvavari kusangana nazvo. Adventures iyo inoenderera ichidzoreredzwa mune akati wandei emabhuku akateedzana akakodzera kune vadiki vaverengi.
Sherlock, Lupine neni - Irene Adler
motokari 10 mazita yatove kubva muunganidzwa uyu wakanangana nevaverengi Kubva pamakore masere. Yekupedzisira yakabuda munaKurume, Ishe wematsotsi.
Iyo purojekiti inotungamirwa nemunyori weItari PD Baccalario, yakanyorwa na Alessandro gatti (pasi pezita rekunyepedzera Irene Adler) uye inoratidzwa na Iacopo Bruno. Uye chikamu chemafungiro e chii chaizoitika dai vanhu vatatu ava vaizivikanwa vakasangana muhuduku hwavo uye nzira dzavo dzinenge dzakayambuka.
Iyi saga inotakura 5 mazita yatove uye yakanangana nevaverengi kubva pamakore makumi matanhatu. Iyo protagonist ndiyo chipfuwo icho Julia naDiego vanokwanisa kuve nacho. Zita rake anonzi Perrock, Perrock Holmes, uye ari kure nekungova imwe pooch, ane simba rekuverenga pfungwa dzemunhu chero upi zvake anokwenya dumbu rake.
Munyori weBarcelona Isaac Palmiola akarova zvibodzwa mune ino inonakidza nyowani twist pane yakasarudzika yekare.
1. Matikitivha maviri nehafu
2. Materu pamakumbo mana
3. Elemental, anodiwa Gatson
4. Mbama uye pfuti pfuti
5. Hino Gatson akavharirwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Sherlock Holmes kune wese munhu. Zviso zvakawanda zvemutikitivha ane mukurumbira
Jeremy Brett akange asipo. Zvikuru zvekuti ndakatozoverenga zvekare post kuti ndive nechokwadi chekuti ndakanga ndisina kuikanganisa netsaona. Parizvino handina chokwadi, huropi hwangu hahuzobvuma kuti Jeremy Brett haasi mutsamba pamusoro paVaHolmes nekuchinja kwavo. (Saka kana zvimwe fangirl)
Mushure meizvozvo kuwana kwekutanga kusimba, ndiri kuenda kunongedzera kuti inoti century XIX panzvimbo yeXVI uye kuti ndakafarira chinyorwa. Ndakaona Peter Cushing muHound yeBaskervilles asi kwete mumutambo weBBC. Ini ndinonyora pasi kuitira gare gare.
Ndatenda nekutaura kwako, Lilykerry. Yakagadzirisa iyo tsvimbo yeRoma iyo yakatamba kwandiri muzana.
Uye zvinosuruvarisa ini ndaifanira kuita sarudzo pakati pezviso zvakawanda zvaHolmes. Mumwe munhu aifanira kunditadza uye yaive irombe Brett's jana.
Zvakare, ndinokutendai zvikuru.
Chokwadi Chaungasaziva Nezve JK Rowling